January 3, 2021 - Online Hartha
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်က ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်း ခြေတော်ရင်းရှိ တမာပင်တစ်ပင်မှ ထန်းရည်များကျနေသော မြင်ကွင်းပုံရိပ်များ(ရုပ်သံ)
ထူဆန်းလှပါလား… 👉#နွားထိုးကြီးမြို့နယ်က ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်း👈 နွားထိုးကြီးမြို့နယ် ကန်ကြီးကျေးရွာ လျောင်းတော်မူဘုရား ခြေတော်ရင်းရှိ တမာပင်တစ်ပင်မှ ထန်းရည်များကျနေသော မြင်ကွင်းပုံရိပ်များ ကန်ကြီးရွာက ထန်းဇင်မြို့သာလမ်းက သွားရင်ရတယ်… အောင်ချမ်းသာလမ်းခွဲမှသန်းပင်လှ သန်းပင်လှမှ တဆင့် ကုန်းသာရွာမှ တဆင့် ကန်ကြီး နွားထိုးကြီးမြို့နယ် မြောက်ဘက်အစွန်ဆုံးပါ လာရောက်ကြည့်ရှု့သူများနှင့် စည်းကားလျှက်ရှိပါတယ်…။ Photo Credit – HTH သတင်း/ရုပ်သံ-နိုင်လင်း AlinnMyay(အလင်းမြေ) Unicode Version ထူဆနျးလှပါလား… 👉#နှားထိုးကွီးမွို့နယျက ထူးဆနျးတဲ့ဖွဈရပျဆနျး👈 နှားထိုးကွီးမွို့နယျ ကနျကွီးကြေးရှာ လြောငျးတျောမူဘုရား ခွတေျောရငျးရှိ တမာပငျတဈပငျမှ ထနျးရညျမြားကနြသေော မွငျကှငျးပုံရိပျမြား ကနျကွီးရှာက ထနျးဇငျမွို့သာလမျးက သှားရငျရတယျ… အောငျခမျြးသာလမျးခှဲမှသနျးပငျလှ သနျးပငျလှမှ တဆငျ့ ကုနျးသာရှာမှ တဆငျ့ ကနျကွီး နှားထိုးကွီးမွို့နယျ မွောကျဘကျအစှနျဆုံးပါ လာရောကျကွညျ့ရှု့သူမြားနှငျ့ စညျးကားလြှကျရှိပါတယျ…။ Credit … Read more
Categories ကြားသိသမျှ, အထွေထွေဗဟုသုတ Leaveacomment
ရက်ပိုင်းအတွင်း မျက်နှာပေါ်က တင်းတိပ် အမဲစက် တွေကိုဖယ်ရှားမယ်
ရက်ပိုင်းအတွင်း တင်းတိပ် အမဲစက်ပျောက်နည်း အမဲစက်ပျောက်နည်းထဲမှာ အာလူးကို အမြဲသုံးကြတယ်။ အာလူးက bleaching အရောင်ချွတ်တဲ့ အာနိသင်ရှိတယ်… တင်းတိပ်မှာသုံးတဲ့ hydroquinone နဲ့ အာနိသင်တူပါတယ်။ ဘေးထွက်နည်းတယ်…. နောက်တမျိုးက ကြက်သွန်နီဖြစ်တယ်…ဆာလဖာကြွယ်ဝတဲ့ ကြက်သွန်နီမှာ အမဲစက်၊အမာရွတ်ကို သက်သာစေတဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်… ရှောက်ရည်က ဗီတာမင်စီ ကြွယ်ဝပြီး အသားအရေပြုပြင်ပေးတယ်….အင်တီအောက်စီးဒင့်အာနိသင်ရှိလို့ အသားဖြူစေတယ်။ ဆဲလ်သစ် ဖြစ်ဖို့ အားပေးတယ်…မျက်နှာအမဲစက်အတွက် ဒီပစ္စည်းသုံးမျိုးကို အချိုး ညီညီ သုံးစွဲရမယ်… အာလူးသီး- တစ်လုံး ကြက်သွန်နီ- တစ်ခြမ်း ရှောက်သီးရည်-တစ်ခြမ်း အားလူးသီးတလုံးကို အခွံသင်ပြီး အစိတ်ကလေးတွေလုပ်ပါ။ ကြက်သွန်နီတခြမ်းကို ယူပြီး အလားတူအစိတ်ကလေးတွေလုပ်လိုက်ပါ။ အာလူးနဲ့ ကြက်သွန်နီကို ရောပြီး blender နဲ့ တသားတည်း ကြိတ်ပါ… ရလာတဲ့အရောကို ရှောက်သီးရည် ညှစ်ထည့်ပါ။ paste(ခပ်ပြစ်ပြစ်)ရလာလိမ့်မယ်။ … Read more
အခြိနျတိုအတှငျး သှားအောကျခွကေ ဂြိုး (ခြိုး)တှကေို ဖယျရှားနိုငျဖို့ သဘာဝနညျးလမျး(၂)သှယျ
အချိန်တိုအတွင်း သွားဂျိုး (ချိုး)တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ သဘာဝနည်းလမ်း ၂သွယ် သွားမှာ ဂျိုးတွေကပ်ရတာဟာ သွားနဲ့ ခံတွင်း သန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်ပေးတာ အားနည်းလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သွားဆရာဝန်တွေဆီက ဈေးကြီးတဲ့ ကုသနည်းတွေနဲ့မဟုတ်ဘဲ သဘာဝနည်းလမ်းနဲ့ အရင်ဖြေရှင်းကြည့်ရအောင်ပါ။ နည်းလမ်း ၁ ပါဝင်ပစ္စည်း မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း စပါကလင်ရေ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း ရေ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း သွားတိုက်ဆေး လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ပြုလုပ်နည်း ခွက်တစ်လုံးထဲမှာ ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုရောပြီး မွှေလိုက်ပါ။ ပြီးရင် သွားတိုက်တံပေါ်မှာတင်ပြီး ၄ မိနစ်လောက်နေစဉ် သွားတိုက်ပေးပါ။ တစ်ပတ်ကို တစ်ခါလုပ်ပေးပါ။ နည်းလမ်း ၂ သံပုရာသီး (သို့) သံပုယိုသီး … Read more
အညောင်းမိလို့ ထိုင်းမှိုင်းနေသူများ တစ်ကိုယ်လုံး နာကျင်ကိုက်ခဲ နေသူများအတွက်
အညောင်းမိလို့ ထိုင်းမှိုင်းနေသူများ တကိုယ်လုံး နာကျင်ကိုက်ခဲ နေသူများအတွက် ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်းလေး လက်တွေ့ ဆေးစွမ်း ကောင်းလေး မျှဝေပေးပါရစေ..။ အညောင်းမိလို့ ထိုင်းမှိုင်းနေသူများ တကိုယ်လုံး နာကျင် ကိုက်ခဲ နေသူများ…။ ရာသီ ပေါ် အညောင်းမိ တုတ်ကွေး ဖျားနာ ခံစားနေရသူများ…။ ဤ ပုံပါ အပင်ကို အရွက် အမြစ်မကျန် ပြု တ်သောက်ခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်…။ အပင်နာမည်က. သံမနိုင်ကျောက်မနိုင်ပင်ခေါ် တောမြေပဲပင် ပါ။ ဒေသအလိုက် အခေါ်ဝေါ် ပြောင်းနိုင်ပါသည်…။ နောက်ထပ်.. အညာဒေသတွေမှာ ကျောက်ကွဲပင်လို့လဲ ခေါ်ပါသေးသည်…။ ဆီးကျောက်တည် နေသူများ သောက်ပေးပါက. ကျောက်ကွဲကြေစေပြီး. ပျောက်ကင်းနိုင်သည်ဟူ၏..။ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ဖြစ်ပါသည်…။ ဘေးဘယာတွေ ဝေးကွာကြပါစေ…။ credit – မူရင်း Unicode … Read more
ညှငျးပေါကျလို့ အခကျတှနေ့သေူမြား အတှကျ ညှငျးပြောကျတဲ့ ဆေးနညျး
ညှင်းပေါက်လို့ အခက်တွေ့နေသူများအတွက် ညှင်းပျောက်တဲ့ ဆေးနည်း လက်တင်ဖြင့် Cassia Toraဟုခေါ်ပါသည်။လူအတော်များများ အဖြစ်များကြ၏။ဆိုရပါသော် အရေပြားမှိုရောဂါ ဖြစ်သည်။ မိမိအသား အရောင်ထက် ပို၍ဖြူနေခြင်း၊ပို၍ရင့်နေခြင်းဖြစ် သည်။အချိန်ကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ တဖြည်းဖြည်း ပွားလာ တတ်လေသည်။ ရင်းဘတ်၊ ပါးပြင်၊ဂုတ်သား၊ ကျောပြင် ၊လက်မောင်း၊လည်ပင်းနေရာအနှံ့ အကွက်အကွက်များ ပျံ့ပွားနေတတ်သည်။ ယောက်ျား၊မိန်းမတို့ ညှင်းပေါက်၍ အလှပျောက်ပြီး စိတ်ညစ်သူတို့များကြသည်။ရုပ်လေးတော့ချောပါရဲ့ ညှင်း တွေ ပေါက်နေတာဆိုးတယ် ဒီလိုမျိုးပြောတတ်ကြသည် ကိုး..။ညှင်းရောဂါသည် Mallasseziaဟုခေါ်သောမှို တစ်မျိုး ကြောင့် ဖြစ်ပွားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ နာကျင်မျုမရှိသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံယားယံတတ်ပါသည်။ခေတ်ပေါ်ဆေးဝါးများ ဝယ်ယူရန်ခက်ခဲသူတို့ အတွက် ညှင်းကို ပျောက်ကြောင်းဆေးနည်းကောင်းလေးအား တင်ပြပါအံ့…။ ဆေးနည်း – ဒန်းကျွဲပင်စေ့ များကို မြေအိုးတွင်မီးကျွမ်းအောင်လှော်ပြီး အမှုန့်ထောင်းပါ။ ထိုဒန့်ကျွဲမှုန့်နှင့်နှမ်းဆီစစ်စစ်လေးအား ရောမွှေပြီး ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း လိမ်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ (၁၀)ရက် … Read more
(၁) ပြွတ်နဲ့ထိုးသွင်းပြီး ရေမဆေးရ တစ်ချို့က Douching Advice (ရေပြွတ်ကဲ့သို့သော)အရာများသုံးပြီး ယောနိအတွင်းပိုင်းကို ထိုးသွင်းကာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြပါတယ်။ ပိုးသတ်သန့်စင်ထားကြောင်း ကြေငြာထားရင်လည်း အသုံးပြုဖို့ မသင့်ပါဘူး။ သားအိမ်အတွင်းပိုင်းဟာအရမ်းနူးညံပြီး pH ပမာဏလွန်ကဲတဲ့ ရေနဲ့ တွေ့ရင် ပျက်ဆီးတတ်သလို အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ (၂) လက်ဖြစ်ဆေးဝါးများ မသုံးရ တစ်ချို့တွေက ရာသီလာတဲ့အခါမျိုးမှာ အင်္ဂါရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေဖို့ ပေါင်းမြက်နဲ့ အုံခြင်း၊ လက်ဖက်ခြောက်အဖန်ရည်နဲ့ ဆေးခြင်း၊ ရေခဲသွင်းခြင်းများ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါတွေကို လုံးဝ ရှောင်ရှားရမယ်ဆိုတာာ အမျိုးသမီးတိုင်း သိစေချင်ပါတယ်။ (၃) အရာဝတ္ထုများနဲ့ ကျဉ်းမြောင်းအောင် မပြုလုပ်ရ လင်ယောက်ျားရဲ့ အလိုကိုလိုက်ပြီး အရာဝတ္ထု၊ ဖော့၊ စက္ကူအစရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေသုံးပြီး လမ်းကြောင်းကျဉ်းမြောင်းအောင်လုပ်ခြင်း၊ ကျောက်ချဉ်ကဲ့သို့သော အရာများ လိမ်းခြင်းဟာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကိုတောင် … Read more
သွေးထွက်အောင်မှန်တဲ့ ဂဏန်းဗေဒင် သင်ရောဘယ်နေ့မွေးသလဲ ? မွေးနေ့..မွေးရက်များနဲ့ သူရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိများ. တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 1st, 10th, 19th, 28th မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၁) သမား… တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 2nd, 11th, 20th, 29th မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၂) သမား… တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 3rd, 12th, 21st, 30th မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၃) သမား… တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 4th, 13th, 22nd, 31st မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၄) သမား… … Read more
တစ်ခါတုန်းက ရွာကလေးတစ်ရွာမှာ သားအဖ နှစ်ယောက်ရှိတယ် ။ ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးလေကို မွေးမွေးပြီး ကတည်းက အလွန်အမင်းကို ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ရတယ် ။ သမီးလေး မွေးပြီးလို့ လသားအရွယ်မှာပဲ မိခင်က ဆုံးပါးရှာတဲ့အတွက် မိတဆိုး သမီးလေးဆိုပြီး လိုလေသေးမရှိ ထားခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘဝကံနုံချာလွန်းတဲ့ အတွက် ဆင်းဆင်းရဲရဲ့ ချို့ချို့တဲ့တဲ့နေခဲ့ရရှာတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ သမီးလေး အပျိုပေါက်အရွယ် ရောက်လာခဲ့တယ် ။ “ အဖေ . . သမီး မြို့မှာသွားပြီးကျောင်းတက်ချင်တယ် ” အားတက်သရော ပြောလာတဲ့ သမီးငယ်စကားကြောင့် ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ရင်ထဲ ဆို့နင့်သွားခဲ့ရတယ် ။ “ အေးပါသမီးရယ် အဖေပိုင်တဲ့ လယ်ကလေးရောင်းပြီး သမီးကို မြို့ကျောင်းထားပေးမှာပေါ့ ” ဆိုပြီးအားပေးစကား … Read more
အသီး အရွက် ကြီးစေသော ဆေးရည် အလွယ်တကူပြုလုပ်နည်း
အသီး အရွက် ကြီးစေသော ဆေးရည် အလွယ်တကူပြုလုပ်နည်း အသီးအရွက်တွေ တင်တယ် သီးတယ် ကြီးတယ် ဆိုတာ လက်တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ပြုလုပ်နည်း ရေ ၂၀ လီတာကို ဇလားထဲ အရင်ထည့်ထားးပါ ။ငါးပိရည်ကို ပစ်အောင် ကျိုပါ ။ အအေးခံပြီး ဇလားထဲ ငါးပိရည် ၅၀ စီစီ ထည့်ပါ ကြက်ဥ ၁ လုံးက်ို သမအောင် ခေါက်ပါ ၊ရေ၊ ငါးပိ ရောထားသော ဇလားထဲသို့ ကြက်ဥထည့် ရောသမအောင်မွှေပြီး အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။ နံနက်ပိုင်းတွင်သာ ဖျန်းပေးရပါမည်၁ ပတ်ကို ၁ ကြိမ်ဖျန်းပက်နိုင်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ Unicode Version အသီး အရှကျ ကွီးစသေော ဆေးရညျ အလှယျတကူပွုလုပျနညျး အသီးအရှကျတှေ … Read more
စိုကျပြိုးဖွဈထှနျးဖို့ မွခေဉျြ ငနျ အလှယျ တိုငျးနညျး မိမိမွကေ ဘာဖွဈနမှေနျးမသိ ထညျ့ခငျြရာထညျ့မိနတေုနျးပဲလား
မြေချဉ်ငန် အလွယ်တိုင်းနည်း မိမိမြေက ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိ ထည့်ချင်ရာထည့်မိနေတုန်းပဲလား ခေါင်းစဉ်မှာ ပြောသလိုပါပဲ လက်ရှိမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်သူ မြေပိုင်ရှင် တွေဟာဆိုရင် မိမိမြေက ဘာအမျိုးအစားမှန်းမသိ မြေချဉ်ငန်ဓာတ်က(pH)ဘယ်အနေအထားမှာရှိမှန်းမသိဘဲ သူများကထုံးထည့်ရင် ထုံးတွေလိုက်ထည့်ပြီး သူများက ဂျစ်ပဆမ် (ကျောက်မှုန့်) ထည့်ရင် ဂျစ်ပဆမ်တွေ ထည့်နေကြတာကို တွေ့လာရပါတယ်။အကြမ်းအားဖြင့် မြေဆီလွှာအမျိုးအစားက သဲမြေ ၊ နုန်းမြေ နှင့် ရွှံ့စေးမြေ ဆိုပြီး ၃ မျိုးခွဲလို့ရပါတယ် ။ ထိုမှတစ်ဆင့် မြေချဉ်ငံဓာတ်ကို စစ်ဆေးပြီး အက်ဆစ် ဆန်တဲ့ မြေချဉ်အမျိုးအစားလား ဆားဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့ မြေငံလားဆိုတာကို ပြန်လည်ခွဲခြားစီစစ်ရပါမယ် ။ ဒါမှသာ ချဉ်ရင်ထုံးထည့် ငံနေရင် ဂျစ်ပဆမ် (ကျောက်မှုန့်ထည့်) ဆိုပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်မှုတွေလုပ်ရမှာပါ ။ (သီးနှံအလိုက်လိုအပ်တဲ့ မြေချဉ်ငံဓာတ်ဇယားကို ကောမန့်မှာဖော် ပြပေးသွားပါ့မယ်) … Read more